कति शुभ छ तपाईको यो साता ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक ग्रहफल – " सुलभ खबर "
कति शुभ छ तपाईको यो साता ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक ग्रहफल
आज फागुन ३ देखि ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
प्रेमिकाको सहयोग तथा उत्प्रेरणाले उचाइमा पुग्दै प्रतिस्पर्धामा सफलता हात लाग्नेछ । तपाईँको क्षमताले उचित स्थान प्राप्त गरी पदोन्नतिको ढोका खोल्नेछ । विदेश भ्रमणको अवसर आइलाग्ने सम्भावना देखिन्छ । जोडी नम्बरको सवारी साधनले विशेष फाइदा पुर्‍याउन सक्छ । गणेशको आराधना गर्दा विघ्नहरू समाप्त हुनेछन् ।